खानपानको लागि गरिने यी गल्ती, जसले हामीलाई रोगी बनाउँछ | NewsSudur
खानपानको लागि गरिने यी गल्ती, जसले हामीलाई रोगी बनाउँछ
विश्वमा भोकमरी अर्थात खान नपाएर जतिको मृत्यु हुन्छ, त्यो भन्दा कम आँकडा छैन खानपानकै कारण मृत्यु हुनेहरुको । बाँच्नका लागि खाइने खानेकुराले मृत्युको मुखमा पुर्‍याउँछ, जब त्यसलाई सही ढंगले प्रयोग गरिदैन ।
पेट भर्न वा जिब्रोको स्वाद मेट्न ?
खाना खानु भनेको पेट भर्नु मात्र होइन । वा जिब्रोको स्वाद मेट्न मात्र पनि होइन । शरीरलाई आवश्यक उर्जा, शक्ति प्राप्त गर्नका लागि हो । खानेकुराले हाम्रो शरीरलाई चाहिने पोषण प्रदान गर्छ ।
तर, हामी जानेर वा नजानेर यस्तो खानपान गरिरहेका हुन्छौ, जसले स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको हुन्छ । भनिन्छ, खान नजानेर धेरै व्यक्ति रोगको शिकार हुन्छन् । हरेक खानाको आफ्नै प्रकृति हुन्छ । त्यसलाई पकाउने वा सेवन गर्ने विधि पनि फरक हुन्छ ।
तर, सन्तुलित हुनुपर्छ
कसरी खानेकुराले रोगी बनाउँछ ?
१. धेरैजसोले ग्यासमा खाना पकाउँछन् । चर्को आगो वा रापमा खाना पकाउनु राम्रो मानिदैन । त्यसले खानेकुरामा रहेको पोषण तत्व नष्ट गर्छ ।
रेष्टुरेन्टहरुमा खानेकुरा पकाउने क्रममा यसरी तेल तताउने गरिन्छ, जसबाट धूँवा निस्कन्छ । हेर्दा आकर्षक देखिने यस्ता पाककला स्वास्थ्यका लागि भने अनुकुल हुँदैन ।
२. धेरैजसोले पाकिसकेको खानेकुरालाई पटक पटक तताएर सेवन गर्छन् । अहिले फ्रिजको प्रचलनले त यसलाई झनै बढवा दिएको छ । पाकिसकेको खानेकुरा पुन आगोमा तताउँदा त्यसमा रहेको पौष्टिक तत्व नष्ट हुने मात्र होइन, त्यो विषाक्त बन्छ । अर्थात हामी खानेकुरासँगै विष सेवन गर्न पुग्छौ ।
३. कुनैपनि खानेकुरा डिप फ्राई गरेर सेवन गर्नु भनेको पेटको रोग निम्त्याउनु हो । डिप फ्राइ गरेको खानेकुरा जिब्रोलाई मिठो त लाग्छ, पेटमा गएपछि त्यसले नराम्रो असर गर्छ । अझ पेट सम्बन्धी समस्या भएका, पाचन प्रणाली कमजोर भएका, ग्याष्ट्रिकका रोगी, मधुमेह, उच्च रक्तचापको रोगी, पायल्सका रोगीले यसरी डिप फ्राई गरेको खानेकुरा खानै हुँदैन ।
४. काँचो र पाकेको मासुलाई एउटै प्लेट वा भाँडामा राख्नु हानिकारक हुन्छ । अर्थात मासु वा माछालाई पकाउनुअघि जुन प्लेटमा राखिएको हुन्छ, पकाइसकेपछि पनि सोही प्लेट प्रयोग गरिन्छ । हतारमा वा बेवास्ता गर्दा यस्तो गल्ती हुन्छ । किनभने काँचो मासुमा केहि ब्याक्टेरिया हुन्छ जो सजिलै पकाएको मासुमा सर्न सक्छ ।